SAWIRRO: Wariyaasha ka howlgala magaalada Gaalkacyo ee Puntland & Galmudug oo lagu tababarayo Tabinta Wararka Xasaasiga ah | Www.tusmo.net
SAWIRRO: Wariyaasha ka howlgala magaalada Gaalkacyo ee Puntland & Galmudug oo lagu tababarayo Tabinta Wararka Xasaasiga ah
GAALKACYO(P-TIMES) – Wariyaasha ka howlgala magaalada Gaalkacyo qaar kamid ah ayaa loo qabtay Tababar ku saabsan sidda loo tabayo wararka Xasaasiga ah ee marar badan ka dhaca Soomaaliya, gaar ahaana gobalka Mudug.
Tababarkan waxaa ka soo qeybgalay furitaankiisa xubno ka socday labada maamul ee Puntland & Galmudug, waxaana diiradda lagu saaray hadaladii laga jediyey sidii looga wada shaqeyn lahaa nabadda.
Wariyaasha ayaa lagu booriyey in ay door wanaagsan ka qaataan nabadda iyo daganaanshaha oo ay tahay arrinta ugu muhiimsan ee ay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobalka Mudug u baahin karaan.
Macalimiinta tababarkan bixinaysay ayaa Ardayda u soo jeediyey casharo la xariira habka ugu wanaagsan ee ay utabin karaan wararka xasaasiga ama dhiilada xambaarsan, waxaana la baray hanaanka ugu sahlan ee loo mari karro warar iska soo horjeeda, haddana xiisad laga yaabo in ay kicin karaan.
Sidaas oo kale maalmaha uu sii socda tababarkan waxaa la baran doona sidda looga shaqeeyo nabad taabagal ah iyo Anshaxa ay waajibka tahay in aysan dhaafin bulshadu, taas oo ay tahay in ay Ilaaliyaan Wariyaasha Soomaaliyeed.
Qabanqaabada Tababarkan waxaa iska lahaa maamulada Puntland & Galmudug, waxayna talaabadan qaadeen markii ay garowsadeen bahida loo qabo in warbaahinta gudaha loo isticmaalo si looga dheeraado dagaalo iyo dibu dhaca gobalka Mudug.